धेरै समय बसेरै बिताउनेलाई कति व्यायाम चाहिन्छ? :: Setopati
घन्टौं घन्टासम्म एकै ठाउँ बसेर बिताउनेहरूले शरीरमा नजानिँदो किसिमले धेरै स्वास्थ्यजन्य समस्या उत्पन्न गरिरहेका हुन्छन्।
यस्तोमा दैनिक कम्तीमा ११ मिनेट व्यायाम गर्ने वा ३५ मिनेट फटाफट हिँड्ने हो भने त्यस्ता समस्याबाट मुक्ति पाइने अध्ययनले देखाएको छ।
पछिल्लो समय गरिएको एउटा उपयोगी अध्ययनले सक्रिय र निष्क्रिय दुवैथरी जीवनशैली अपनाएकाहरूको आनीबानीकै हिसाबले जीवन कति लामो वा छोटो भन्ने तय पनि गर्छ भनेर पत्ता लागेको छ।
अध्ययनमा दसौं हजार मानिसका विवरण संकलन गरी उनीहरूका दैनिकी विश्लेषण गरिएको थियो। त्यसमा असाध्यै कम हलचल गर्ने मानिसहरू युवावस्थामै मृत्युको शिकार हुने उच्च जोखिममा रहेको देखिएको थियो।
तर, त्यस्ता मानिस पनि अब जुरुक्क उठेर हिँड्न थाल्ने हो भने त्यस्तो खतरा पुनः घटाउँदै लैजाने रहेछन्। त्यसनिम्ति फेरि असाध्यै नै बढ्ता हिँडडुल गर्नुपर्ने पनि होइन।
यो पनि हेर्नुस्ः पुट्ट लागेको भुँडी घटाउन दैनिक १० मिनेटको कसरत
तर, के त्यति मात्रले बाँकी समय बसेरै बिताउनेको शरीरलाई आवश्यक व्यायाम पूरा हुन्छ?
अब अध्ययनमा समावेश धेरै मान्छेले यस्तै जवाफ दिए भने के होला?
तर अध्ययनमा त उनीहरूका कुरामै भर गरियो। 'सक्रिय' भनेकाले बसेरै धेरै समय बिताउनेलाई पनि थोरै व्यायाम गर्न भनियो। अचम्म भइदियो, त्यति नै मात्राको व्यायामले पनि उसलाई फाइदा पुर्‍यायो।
-एकदमै थोरै वा हिँड्दै नहिँड्ने
- दैनिक ११ मिनेट व्यायाम गर्ने तर धेरै समय बसेरै बिताउने
-थोरै बस्ने, धेरै सक्रिय हुने
यी सारा अंकगणितीय विवरणलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउँदै अध्येताहरूले एउटा यस्तो अनुकूल विन्दु पहिल्याए जसले शारीरिक गतिविधि र दीर्घायुबीच बुझ्न व्यायामको सजिलो मात्रा पेश गर्थ्यो- दिनको लगभग ३५ मिनेट फटाफट हिँड्ने वा करिब ११ मिनेट व्यायाम गर्ने।
(द न्यूयोर्क टाइम्सका लागि ग्रेचेन रेनोल्ड्सले लेखेको स्टोरीको भावानुवाद)
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ २९, २०७८, १०:५०:००